19 Podcasts Kaas Oo Ka Dhigi Doona Mid Ka Wanaagsan Suuq geynta Baraha Bulshada | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/19 Podcasts oo kaa dhigi doona suuqgeyn bulsho oo wanaagsan
19 Podcasts oo kaa dhigi doona suuqgeyn bulsho oo wanaagsan
Ma rabtaa inaad kor u qaaddo xirfadahaaga warbaahinta bulshada laakiin ma hubin sida loo bilaabo? Ha ka welwelin: 19-kan suuq-geynta warbaahinta bulshada ayaa ku daboolay.
Podcasts-yadu waxay bixiyaan hab fiican oo lagu cadaydo isbeddellada dhijitaalka ah ee ugu dambeeyay ee socodka. Waxaad wax qabsan kartaa markaad safarka ku jirto, samaynayso suxuunta, ama shaqaynaysa. Waxaa dheer, waxaa la tusay inay kor u qaadaan waxbarashada iyo fikirka muhiimka ah!
Maqaalkan, waxaan ku wadaagi doonaa qaar ka mid ah sawirada warbaahinta bulshada ee aan jecelnahay ee suuqgeynayaasha dhijitaalka ah. Mid kasta oo ka mid ah bandhigyadaan waxaa ka buuxa talooyin, tabo, iyo talooyin kor loogu qaadayo ciyaarta bulsheed.
19 ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee suuq-geynta warbaahinta bulshada
1. Podcast Bulsheed Savvy oo uu qoray Andréa Jones
Podcast-ka Bulshada Savvy waa mid gaaban, macaan, oo had iyo jeer cusub.
Toddobaad kasta, Andréa Jones wuxuu eegaa farsamada cusub ee suuqgeynta warbaahinta bulshada. Waxay wareysatay khubarada hormuudka u ah arrimaha. Waxay sidoo kale la wadaagtaa fikradaha khibradeeda istaraatiijiyadda warbaahinta bulshada.
2. Faa'iidooyinka Bulshada Podcast ee leh Jay Baer iyo Adam Brown
Marka ay timaado xayeysiisyada suuqgeynta warbaahinta bulshada, Faa'iidooyinka Bulshadu waa mid caadi ah. Hawada tan iyo 2012, waxay dabooshaa isbeddellada bulshada, farsamooyinka, iyo in ka badan.
Martigeliyaha Jay Baer iyo Adam Brown waxay la sheekaystaan ​​istaraatiijiyad bulsho oo hormuud u ah toddobaad kasta. Waxay kaloo bixiyaan talo, ka hadlaan qalab cusub, iyo khuraafaadka suuqgeynta been abuurka ah.
3. Bandhigga #AskGaryVee ee Gary Vaynerchuk
Qaabka podcast-kani waa mid fudud laakiin waxtar leh. Dhegaystayaasha ayaa su'aalo ku soo gudbiya Twitter iyaga oo isticmaalaya #AskGaryVee hashtag. Kadib, Gary Vaynerchuk wuxuu dooranayaa lamaane si uu diirada u saaro dhacdo kasta. Waxa uu bixiyaa talooyin ay tahay in uu yeesho warbaahinta bulshada, hal-abuurka ganacsiga, suuq-geynta, iyo kuwo kale.
4. Masters of Scale oo leh Reid Hoffman
Masters of Scale waxaa martigeliyay aasaasaha LinkedIn Reid Hoffman. Waxa uu waraystay ganacsatadii ganacsigoodii meel sare gaadhsiiyay. Dhegayso wada sheekaysiga miisaanka culus sida Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, iyo qaar kaloo badan. Waxaad heli doontaa xigmad suuqgeyneed oo muhiim ah iyo, badanaa, sheeko wanaagsan!
5. Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada ee Michael Stelzner
Michael Stelzner waa maamulaha guud iyo aasaasaha Imtixaanka Baraha Bulshada. Podcast-kan, waxa uu kula wadaaga sheekooyinka guusha warbaahinta bulshada ee ganacsiyada dhabta ah. Waxa ka buuxa talooyin iyo qiso waxtar leh oo ku saabsan mawduucyada sida xayaysiisyada Facebook, IGTV, iyo in ka badan.
6. Bandhiga Hadalka Suuqgeynta Baraha Bulshada
Hadalka Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada waa muuqaal kale oo Baraha Bulshada Baraha Bulshada. Laakin waxa ay qaadanaysaa hab ka duwan sidii hore ee Michael Stelzner. Dhacdo kasta waxaa martigeliyay guddi gaar ah oo ka mid ah faa'iidooyinka warbaahinta bulshada. Aragtidooda kala duwani waxay toddobaad walba ka dhigtaa waayo-aragnimo cusub.
7. Ku wada jawaab PJ Vogt iyo Alex Goldman
Jawaabta Dhammaan waxa laga yaabaa in aanay hoos iman dalladda "Podcasts marketing warbaahinta bulshada." Laakiin waa mid ka mid ah siyaabaha ugu waxtarka badan ee lagu sii wadi karo isbeddellada dhijitaalka ah. Podcast-ku wuxuu daboolayaa dhammaan qaybaha dhaqanka internetka, laga bilaabo GIF-yada ilaa Amazon dib u eegista.
8. Suuqgeynta khadka tooska ah ee Amy Porterfield lagu sameeyay
Amy Poterfield waxa ay ballan qaaday in ay ka dhigayso "wax walba oo aad dhegaysato si ficil iyo faa'iido leh intii suurtogal ah." Bandhigeeda waxa uu isku daraa waraysiyo khabiiro ah, siraha qarsoon, sheekooyinka guusha, iyo in ka badan. Qorshayaasha fulinta yar ee Amy waa gunno dheeri ah.
9. Ku Kordhi Bulshadaada Neal Schaffer
Podcast-ka Neal Schaffer waa aasaas faa'iido u leh dhammaan dhinacyada suuq-geynta khadka tooska ah. Waxa uu daboolayaa wax walba laga bilaabo xeeladaha saamaynta ilaa xayaysiinta dhijitaalka ah. Dhacdo kasta waxay ka kooban tahay tabo faa'iido leh, tabaha, iyo hababka ugu fiican. La yaab maaha in bandhiggu uu leeyahay 4.9 xiddigood oo iTunes ah!
10. Podcast-ka caadiga ah ee Jimcaha ee uu la socdo Tyler Anderson
Jimcaha Casual waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee suuq-geynta warbaahinta bulshada agagaarka. Toddobaad kasta, martigeliyaha Tyler Anderson wuxuu bixiyaa eegno waxa jira iyo waxa aan ka shaqaynayn adduunka dhijitaalka ah. Waxa uu ku daraa "sida loo" qaabka nuxurka sheekooyinka shakhsi ahaaneed ee hoggaamiyeyaasha fikirka. Natiijadu waa mid waxtar leh, madadaalo leh, iyo wargelin leh.
11. Hashtag Sax ah oo leh Sara Tasker
Sara Tasker waa khabiir ku takhasusay Instagram-ka waana ay muujisaa. In this "podcast for hal-abuurka," waxay ku bixisaa riwaayad cusub oo ku saabsan suuq-geynta warbaahinta bulshada. Mawduucyada sida cilmi-nafsiga midabka iyo la xisaabtanka dhijitaalka ah ayaa dhamaantood isku dhafan. Mawduuceeda ayaa hawlgelin doona, la yaabi doona, oo dhiirigelin doona.
12. Suuqgeynta ka badan Coffee ee John J. Wall iyo Christopher S. Penn
Caadi ah iyo sheeko, bandhigan waxaa lagu duubaa kafateeri kala duwan usbuuc kasta. Martigaliyayaasha waxay bixiyaan aqoonta warbaahinta bulshada ee ku saabsan wax walba laga bilaabo SEO ilaa xayeysiinta Facebook. Waxay sidoo kale ka jawaabaan su'aalaha dhegeystaha waxayna wareysteen marti badan.
13. Buugga Suuqgeynta Podcast ee la socda Douglas Burdett
Ka hel xigmadda buugaagta suuq-geynta warbaahinta bulshada ee ugu sarreeya-adiga oo aan weligaa bog rogin. Podcast-kani waxa uu soo bandhigayaa waraysiyo lala yeeshay qorayaasha sida aadka ah loo iibiyo, sida Guy Kawasaki iyo Seth Godin. Waxay wadaagaan talada suuqgeynta warbaahinta bulshada, talooyinka iibka dhijitaalka ah, iyo in ka badan.
14. Podcast-ka DigitalMarketer ee leh Garrett Holmes iyo Jenna Snavely
Bandhigani wuxuu bixiyaa jabsiga suuq-geynta dhijitaalka ah ee ay sameeyaan suuq-geynayaasha adduunka oo dhan. Dhis xirfadaha, hel fikrado cusub, oo hel dhiirigelin! Sheekooyinkan suuqgeyneed ee nolosha dhabta ah waa hab madadaalo leh oo lagu cadaydo hababka ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshada.
15. Podcast-ka wanaagsan ee warbaahinta bulshada ee Todd Austin
Ma dareemaysaa xoogaa hoos u dhac ah? Podcast-ka Wanaagsan ee Baraha Bulshada ayaa ku daboolay. Waxa ay soo bandhigtay sheekooyin kor u qaadaya oo u dabbaaldegaya "sida warbaahinta bulshadu inoogu caawinayso in aan ku noolaano nolol qani ah oo isku xidhan." U fiirso xisaabaadka suuqgeynta dhijitaalka ah, waraysiyada hoggaamiyeyaasha fikirka, iyo in ka badan.
16. Suuqgeynta Smarts ee Kerry O'Shea Gorgone
Suuqgeynta Smarts waa muuqaal kale oo heersare ah. Warbaahinta bulshada whiz Kerry O'Shea ayaa toddobaad kasta wareysa sayid suuqgeyneed oo kala duwan. Dhacdo kasta oo 30-daqiiqo ah waxaa ka buuxa macluumaad, talooyin, iyo fikrado.
17. Manly Pinterest Talooyin la Jeff Sieh
Waxaa laga yaabaa inay la yaabto, laakiin rag badan ayaa isu diiwaangelinaya Pinterest weligood. Talooyinka Manly Pinterest waxay bixiyaan talo qosol leh, waxtar leh oo ku saabsan sida loo hawlgeliyo. Waxa kale oo ay bixisaa aragtiyo ku saabsan suuq-geynta Instagram iyo wax ka badan. Dhegayso marmar ama dhegayso qaybo ka mid ah kaydka.
18. Farshaxanka Gaadiidka Lacag-bixinta ee Rick Mulready
Xayeysiiska warbaahinta bulshadu waa aag si degdeg ah u koraya. Si joogto ah ayay isu beddeshaa, oo maalin kasta siinaya fursado cusub. Farshaxanka Gaadiidka Lacag-bixinta waa hab fiican oo lagu sii wado. Dhegayso agabka xayaysiinta dhijitaalka ah, talooyinka, iyo tusaalooyinka.
19. Soodhawaynta Bulshada ee Pam Moore
Ku biir Pam Moore, mid ka mid ah 10ka ugu sarreeya ee Forbes ee Saamaynta Awoodda Warbaahinta Bulshada, ee Arrimaha Soo Dhawaynta Warbaahinta Bulshada. Bandhigan 5-xiddig waxa uu leeyahay talo ku saabsan warbaahinta bulshada, suuq-geynta nuxurka, iyo in ka badan.
Ku badbaadi wakhti iyo lacag suuq-geynta warbaahinta bulshada Hootsuite. Hal dashboard-ka waxaad ka jadwalaysan kartaa oo daabici kartaa qoraallada, ka qaybgeli kartaa kuwa raacsan, la socon kartaa wada sheekaysiga khuseeya, cabbiri kartaa natiijooyinka, maamuli kartaa xayeysiisyadaada, iyo wax ka badan. Isku day bilaash maanta.
Sida Loo Doorto Furaha Maareynta Dhacdada ee Mareegahaaga
Sida loo isticmaalo aaladda socdaalka iPhone cusub